(ကွန်ပြူတာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ရှေးယခင်က ကွန်ပျူတာကို အမည်တစ်ခု သတ်မှတ်ရန်အလွန်တရာ ခက်ခဲခဲ့သည်။ ယခုအချိန်တွင် ကွန်ပျူတာကို အမည်အမျိုးမျိုးဖြင့် သတ်မှတ်‌ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ အစောဆုံးတွက်ချက်မှုပစ္စည်းသည် အရိုးထွင်းစာပုံစံဖြစ်နိုင်ခြေရှိပြီး နောက်ပိုင်း မြေဆီဩဇာကောင်းခဲ့သော လခြမ်းဒေသ(ယခု- အီရန်၊အီရတ်၊တူရကီ၊ဆီးရီးယားစသည့်ဒေသတဝိုက်)က မှတ်တမ်းများတွင် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ၊ မျိုးစေ့များ စသည်တို့ကိုရေတွက်မှတ်တမ်းပြုရာ၌သုံးသော ရွှံ့စေးလုံးလေးများ၊ ရွှံ့စေးဒုချွန်လေးများပါဝင်ကြပြီး ထိုပစ္စည်းလေးများကို မဖုတ်ရသေးသော ရွှံ့ဘူးများတွင်အလုံပိတ်ထည့်ထားကြသည်။  တရုတ်ပြည်ကဲ့သို့ အရှေ့အာရှ၌ ရေတွက်ရာတွင်သုံးသော မျည်းဖျောင့်တိုဖြင့်ဆွဲခြစ်မှတ်သားခြင်း(နမူနာ- , , )သည်လည်း တွက်ချက်မှုသဘော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်၏။
mov #0, sum      ; sum ကို သုညလို့ သတ်မှတ်ပါ။
mov #1, num      ; num ကို တစ်လို့ သတ်မှတ်ပါ။
loop: add num, sum     ; num ကို  sum ထဲ ပေါင်းထည့်ပါ။
add #1, num      ; num ကို တစ်ပေါင်းပါ။
cmp num, #1000   ; num နှင့် ၁၀⁠၀၀ ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ble loop         ; num <= 1000, 'loop' သို့ နောက်ပြန်သွားပါ။
halt             ; ပရိုဂရမ်ကို ရပ်ပါ။
ဂဏန်းသင်္ချာ နှင့် လော့ဂျစ်ဌာန[ပြင်ဆင်ရန်]
Microsoft Windows Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista,Windows 7, Windows CE, Windows 8, Windows 10
↑ Robson၊ Eleanor (2008)၊ Mathematics in Ancient Iraq၊ ISBN 978-0-691-09182-2 . p. 5: calculi were in use in Iraq for primitive accounting systems as early as 3200–3000 BCE, with commodity-specific counting representation systems. Balanced accounting was in use by 3000–2350 BCE, andasexagesimal number system was in use 2350–2000 BCE.
↑ Ifrah၊ Georges (2001)။ The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer။ New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.။ p. 15။ ISBN 978-0-471-39671-0။
↑ Ifrah၊ Georges (2001)။ The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer။ New York, NY: John Wiley & Sons, Inc.။ p. 17။ ISBN 978-0-471-39671-0။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ပျူတာ&oldid=669102" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၀၉:၀၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။